nepjournal.com Raila odinga oo sheegay in maxkamada sare gaynayo dacwo ka dhan ah madaxtinimadii looga guulaystay - Nepjournal: Garissa County news, Wajir County news, Mandera County news, Kenya news, Somalia news, World news
Raila odinga ayaa sheegay inuu gayn doono maxkamada sare dacwa ka dhan ah doorashadii dhowaan looga guulaystay ee ka dhacday dalka kenya
arintan ayaa ku soo aadaysa xili uu hogaamiyaha mucaaradka kenya Raila odinga sheegay inuusan maxkamada u dacwoon doonin.
Raila oo maanta shir jaraa’id qabtay ayaa sheegay in doorasadii dhowaan lagu soo gabagabeeyay kenya looga shubtay.
hayada doorashada kenya ee IEBC ayaa dhowaan shaacisay in uhuru kenyata uu ku guulaystay doorashadii isbuuc ka hor ka dacday kenya.
sanadkii 2013 kii ayuu Raila odinga u dacwooday maxkamada sare ee kenya ka dib markii looga guulastay doorashadii dhacday xiligaas.
Previous : Mukhtar robow oo kula taliyay ciidamada u dagaalama kooxda alshabaab inay isaga baxaan
Next : Raila to file petition against Uhuru victory